UN: Al-shabaab dhuxul ayey ka dhoofiyaan Kismaayo - BBC News Somali
UN: Al-shabaab dhuxul ayey ka dhoofiyaan Kismaayo
Warbixin cusub ee Qaramada Midoobey ay soo saartay ayaa sheegaysa in ganacsiga dhuxusha ee kooxda Al-shabaab ee laga dhoofiyo dekadda Kismaayo ay Al-shabaab u ahayd il dhaqaale ay ka sameeyaan.
Warbixinta ayaa shidoo kale sheegtay in hal milyan oo jawaan oo dhuxul ah la dhoofiyay iyadoo ciidamada Kenya ay goobjoog ahaayeen, dhuxushaas oo horey u tiilay dekedda Kismaayo.
Arrintan ayaa imaaneyso iyadoo weli Soomaaliya ay saran tahay xayiraadda UN-ka ee 2012 kii la saaray dhuxusha. Maamulka Kenya waxa ay diideen inay wax lug ah ku leeyihiin ganacsiga noocaas ah.
Warbixinta ayaa xustay in Al-shabaab, militariga Kenya iyo maamulka gobolka inay qeybsadaan dhaqaalaha ka soo gala ganacsiga dhuxusha.
Al Shabaab ayaa la sheegayaa in dhuxul oo aad u badan laga dhoofiyay dekedda Kismaayo, lana geeyay dalalka gacanta carabta. Hannaankaasi ayey Al-shabaab ka sameeyeen dhaqaalo gaaraya $250 million intii u dhexeysay 2013 iyo 2014-ka.
Guddiga Qaramada midoobey ee baaray arrintan, ayaa sheegay inay isticmaaleen sawiro lagu qaaday dayax-gacmeed si cadeymaha loo uruuriyo, ayna warar ka heleen dad ka gudaha kusugan.
Tirade rasmiga ah ee dhuxusha la qaaday ayaa aad uga badnaan karto tan la xusay sida ay sheegeen kooxda la socodka xaaladda Soomaaliya (UN monitoring group) in kastoo aysan xusin tirada Maraakiibta la raray.
Al Shabaab ayaa weli waxaa ay helaan Faa'iido ka soo gasho dekedda Kismaayo. waanan mid u dhinganta tii ay heli jireen xilligii ay maamuleen magaalada Kismayo, iyadoo ay ku la kulmayaan howlgalo militari oo aan kala joogsi lahayn.
Howlaha dekedda waxaa la socdo oo maamulo ciidamada Kenya iyo mamulka ku meel gaaka ah ee Juba.
Qaramada midoobey oo dhuxusha Soomaaliya mamnuucday 2012-kii, ujeedadii ay ka lahayd waxaa ka mid ahaa in la yareeyo dhaqaalaha ay Al-shabaab helaan.